PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-01-08 - Idinga ukulekelelwa iSwimming SA
Idinga ukulekelelwa iSwimming SA
- e-Australia ngo 2018.
“NgoMashi sizoqala ukwenza amalungiselelo emidlalo yamaCommonwealth Games ango-2018. Kule midlalo yilapho kuzoqoka khona iqembu laseNingizimu Afrika elizoyosimela kuma-Olympic eJapan ngo-2020. Okungiphatha kabi uma ngicabanga ngakho yindaba yeswimming.
“Kule nhlangano sinababhukudi ababili kuphela uLe Clos (Chad) noVan der Burgh (Cameron),” kusho uSam oke waba yimenenja yamaBhokobhoko kwiNdebe yoMhlaba ngo-2003. Ugcizelele wathi kufanele bazame ukungenelela ukuze kugwemeke ingozi yokugcina bengenabo ababhukudi abazomela elakuleli uma kukhona okwenzekayo kubo njengamanje.
“Ngizwa kuthiwa uVan der Burgh (Cameron) uzoshadelwa maduze nje, okungaba yingozi ngoba awazi noma uyokube esekhona yini eGold Coast, ngo2018.
“Uveze ukuthi uma behlele kahle nezinhlangano ezingenzanga kahle eRio (Olympics Brazil 2016) ezifana neJudo kwabesifazane namadoda ngokunjalo namabhayisikili bazokwazi ukubuya nezindebe ezilinganiselwa ku-16 ngo-2020.
Phezu kokuthi uSam ebona ingozi elengela le nhlangano ngokugqoza kwababhukudi abanele abangamela elakuleli emiqhudelwaneni yomhlaba, kunesikhalo esesidonse iminyaka sokuhamba ngonyawo lonwabu ezinguqukweni.
Minyaka yonke iqembu lababhudukudi elisuke liyomela iNingizimu Afrika emazweni omhlaba lisuke limhlophe qwa, bengabonwa nangokhalo abamnyama kulo mdlalo.
Akukho ngisho izinkomba zokuthi bakhona ababhukudi abamnyama abakhuliswayo, okunethemba lokuthi eminyakeni ezayo bazokwazi ukuthatha lapho kugcine khona uLe Clos noVan der Burgh babheke phambili.
Njalo uma kuqubuka lempikiswano ngokuba mhlophe kweqembu lababhukudi laseNingizimu Afrika kuyaye kuthiwe kungenxa yengqalasizinda engamachibi okubhukuda engekho ezindaweni ngokomlando walelizwe bekuthiwa ngezabamnyama kuphela.
Kwizaba ezibekwayo kukhona nesithi ezikoleni okwakwaziwa ukuthi zazakhelwe abamnyama kuphela uhulumeni wobandlululo wayenza isiqiniseko sokuthi awekho amachibi okubhukuda.